सचिवालयको बैठक स्थगित गरेर के मा ब्यस्त छन् ओली प्रचण्ड ! || सुनौलो नेपाल
सचिवालयको बैठक स्थगित गरेर के मा ब्यस्त छन् ओली प्रचण्ड !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पेचिलो बन्दै गएको कार्यविभाजनको जिम्मेवारी बाँडफाड गर्न अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृहकार्यमा लागेका छन् । सचिवालयको बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्धय कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन जुटेका हुन् ।
सोम, साउन १३, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस